အနီရောင် ကြက်ခြေခတ် – Min Thayt
Read much . . .
Min Thayt December 28, 2019 January 8, 2020
ကျနော် အမှားတွေကို မကြောက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော် အမှားတွေကိုလည်း မကြိုဆိုပါဘူး။ အမှားတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် ကျနော်တို့ဟာ စိုးရိမ်ချက် ကိုယ်စီရှိကြတယ်။ မမှားခင်ကလည်း အမှားဖြစ်မှာကြောင့် စိုးရိမ် ကြောင့်ကြကြတယ်။ ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ…. မှားနေရင်လည်း အမှားကြောင့်ပဲ ပူပန်နေရတယ်။ မှားပြီးသွား ရင်လည်း မှားခဲ့တာကြောင့် နောင်တရကြတာပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် အမှားဆိုတာကို ကျနော်တို့တော်တော်များများ ဟာ ကြားလိုက်ရင် ခြောက်ခြားနေကြတယ်။
အမှားဆိုတာမှာ လူတွေသတ်မှတ်ပြဌာန်းချက်ကြောင့် အမှားလို့ သတ်မှတ်ခံရတာတွေလည်း များစွာရှိတယ်။ အမှားဆိုတာ မျက်နှာစာပေါင်းစုံရှိတယ်။ တခါတရံ အမှားဟာ လက် တစ်ခုလိုပဲ။ တစ်ဖက်ကကြည့်ရင် လက်ဖဝါး။ တဖက်ကကြည့်ရင် လက်ဖမိုး။ အမှားမှာ ခေါင်းနဲ့ပန်း ရှိသလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
• အမှားတွေနဲ့ပတ်သက်ရင် ကျနော်တို့ ထားတတ်တဲ့သဘောထားက ဘာလဲ။
• ကျနော်တို့ဟာ အမှားအပေါ်မှာ ဘယ်လိုခံယူကြသလဲ။
• ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မှားတဲ့အမှားအပေါ်မှာ ဘယ်လို သဘောထားသလဲ။
• သူများ မှားတဲ့အမှားအပေါ်မှာ ဘယ်လို ရှုမြင်ကြသလဲ။
ကျနော်ဟာ အမှားတွေကို ကြောက်ခဲ့ပါတယ်။ မှားမှာကြောက်ပြီး ဘာကိုမှ မလုပ်ဘဲ တွန့်ဆုတ်နေခဲ့တဲ့ အကြိမ် ပေါင်းများစွာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အမှားဆိုတာကို ကျနော် သူငယ်တန်းကျောင်းသား ဘဝကတည်းက မြင်ဖူးခဲ့တယ်။ အမှားဆိုတာ အနီရောင် ကြက်ခြေခတ်။
ကျနော်တို့ ကြီးပြင်းလာတာနဲ့အမျှ အမှားရဲ့ ဗားရှင်းတွေဟာ အမျိုးမျိုးဖြစ်လာတယ်။ အမှားဟာ ဘာလဲ။ အမှား ကို ဘယ်သူက ဘယ်လို သတ်မှတ်တာလဲ။ အမှားဆိုတာက ဘယ်လို အကောင်မျိုးလဲ။ အမှားဟာ ဘယ်လို မွေးဖွားလာတာလဲ။ အမှားဟာ ဘယ်လောက်လောက် အသက်ရှည်သလဲ။ အမှားဟာ ဘာတွေကို ဖြိုချဖျက်ဆီး နိုင်သလဲ။
သူငယ်တန်းအရွယ်တုန်းက အမှားဆိုတာ အနီရောင် ကြက်ခြေခတ်ဆိုတာပဲလို့ မှတ်ယူခဲ့တယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အသက်အရွယ်တွေ ကြီးရင့်လာတဲ့အခါမှာ အနီရောင် ကြက်ခြေခတ်ဟာ လူသားတိုင်းရဲ့ ဘဝအတွက် သိပ် ဆန်းကြယ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ အနီရောင် ကြက်ခြေခတ်ဆိုတာ…. စက္ကူပြင်ပေါ်က လေးကြောင်း မျဉ်းတွေကြားထဲမှာပဲ နေထိုင်တဲ့အရာ မဟုတ်တော့ဘူး။ အနီရောင် ကြက်ခြေခတ်ဟာ လူတွေရဲ့စိတ်ကို လွှမ်း မိုးခြယ်လှယ်တဲ့ အမှတ်သရုပ်ဖြစ်လာတယ်။ အနီရောင် ကြက်ခြေခတ်ကို မြင်လိုက်ရင် ထရော်မာတစ်ခု ရသလို ခံစားရတယ်။
မဆလခေတ် ဝန်ထမ်းလောကမှာ မင်နီတားခံရတယ်ဆိုတာ ရှိတယ်တဲ့။ စစ်တပ်ထဲမှာလည်း မင်နီတားခံရ တယ် ဆိုတာ ရှိသတဲ့။ မင်နီဆိုတာ ဘာလဲ။ အမှားဆိုတာ ဘာလဲ။ အနီရောင် ကြက်ခြေခတ် တစ်ခုဟာ ဘဝ တစ်ခုကို အဆုံးသတ် ပစ်နိုင်သလား။ အနီရောက် မင်နီတစ်တို့ဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့အနာဂတ်ကို ပြောင်းလဲ ပစ်လို့ ရခဲ့သလား။ အမှားတွေ အပေါ်မှာ ကျနော်တို့ ဘယ်လို ခံယူကြသလဲ။ တပါးသူ အမှားအပေါ်မှာ ကျနော်တို့ ဘယ်လို တုံ့ပြန် ယူဆလိုက်ကြသလဲ။
အမှားဆိုတဲ့အပေါ်မှာ ခံယူထားတဲ့၊ ရှုမြင်ထားတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့သဘောထားဟာ အဲသည့်လူ့အဖွဲ့အစည်း ရဲ့ ကံကြမ္မာကို ပြဌာန်းတယ်။ ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ အဲသည့်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အနာဂတ်ကို ပြဌာန်းတယ်။ အမှားဆိုတာကို ကျနော်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းက ဘယ်လို ခံယူကြသလဲ။
ကျနော်တို့ကို မွေးဖွားထားတဲ့ မိဘတွေဟာ ကျနော်တို့ သားသမီးတွေအပေါ် အမှား / အမှန် ဘယ်လိုသတ်မှတ် သလဲ။ အမှား / အမှန်သတ်မှတ်ခြင်းမှာ လူမှုပြဌာန်းချက်တွေ အများကြီး ရောယှက်ပါဝင်နေပါတယ်။ အမှားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စကားပုံတွေ၊ အဆိုအမိန့်တွေလည်း မြောက်မြားစွာ ရှိခဲ့ပြီးပြီ။ အမှားဆိုတာ ဘာလဲ။ အမှားမှာ သင်္ခါရဆိုတာ ရှိသလား။
အမှား / အမှန် သတ်မှတ်ချက်တွေဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့ တစ်ခု မတူပါဘူး။ ပညာရေးဟာ အမှား / အမှန်ဆိုတာကို ဘယ်လို ချည်းကပ်သလဲ။ ဒီကိစ္စဟာ သိပ်အရေးကြီးတယ်။ အမှားအပေါ်မှာ ချည်းကပ်ပုံ မှားရင် လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုလုံးကို ထိခိုက်တော့တာပဲ။ ဒီလိုပဲ အဲသည့်လူ့အဖွဲ့အစည်းတည်ရှိနေတဲ့ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကို သက်ရောက်တော့တာပဲ။ အမှားအပေါ်မှာ အကဲဖြတ်တဲ့ စံတွေ ရှိလိမ့် မယ်။
အမှား အမှန် ဆိုတဲ့ ပေတံနဲ့ ကျနော်တို့တွေဟာ နေ့တိုင်းလိုလို နပန်းလုံးနေရတယ်။
အမှား အမှန်ကို ဘယ်သူက သတ်မှတ်တာလဲ….
သတ်မှတ်တဲ့သူက အမှား အမှန်သတ်မှတ်ပိုင်ခွင့်ကို ဘယ်သူက ပေးထားတာလဲ….
အမှား အမှန်သတ်မှတ်ခြင်းဟာ ဘယ်သူ့မှာ အခွင့်အာဏာ ရှိသလဲ….
အမှား အမှန်သတ်မှတ်ဖို့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ဖြစ်ဖြစ် ၊ တစ်စုတစ်ဖွဲ့ကိုဖြစ်ဖြစ် အခွင့်အာဏာ ပေးထားလို့ ရနိုင်ကောင်းသလား….
အမှားဆိုတာ ငယ်ငယ်တုန်း အရွယ်က သူငယ်တန်းမှာ မှတ်ထင်ခဲ့တဲ့ အနီရောက် ကြက်ခြေခတ်ဆိုတာနဲ့ စတင်လိုက်တာ… ဘယ်တော့မှ မဆုံးနိုင်တော့တဲ့ သဘောတရား တစ္ဆေကြီးပါ့လားလို့ ကျနော် အောက်မေ့မိ တယ်။
ည ၉း၃၀
၂၈ ၊ ဒီဇင်ဘာ ၊ ၂၀၁၉ ။
Tagged Life, Philosophy, Value of Life
Previous post ဗုဒ္ဓဒဿန
Next post ဝေါဟာရဆက်ဆံရေး
မြန်မာ့တပ်မတော် နေထွက်ချိန်နှင့် နေဝင်ချိန် (The Rise and Fall of Tatmadaw)